Indodana ka-Anna Sedokova ikhula ikhophi kaSergei Svetlakov, isithombe
Ngokushesha, ezinyangeni ezingu-2.5 indodana ka-Anna Sedokova izoguqula unyaka omdala. Umculi wafihla ubuso bomntwana okwesikhashana, kodwa ekugcineni wanquma ukwanelisa isifiso sabalandeli bakhe. I-Hector encane ayifani kakhulu nomama okwamanje - ingane inezinwele ze-blonde namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Ukushicilelwa kusuka ku-ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Labo abalandela izindaba zakamuva mayelana nokuphila komuntu siqu ka-Anna Sedokova, bayazi ukuthi uyise wengane yakhe yesithathu u-Artyom Komarov, osomabhizinisi osemncane umculi akakaze abe nobuhlobo naye.
facebook.com Yini ngempela ukuthi u-Artem akazange ashade no-Anna, akaziwa. Noma kunjalo, uSedokova yedwa okhuphula umntwana.
Abasebenzisi be-intanethi bahlaselwa ukufana kweNdodana kaSedokova noSergei Svetlakov
Ngolunye usuku ku-Instagram Anna Sedokova wabonakala isithombe esisha sikaHector. Umntwana okhulile wakhumbuza ababhalisile be-showman owaziwayo, uSergei Svetlakov.
I-instagram.com/annasedokova Amazwana abanjwe ukufana okumangalisayo. Ingane inezici eziningi kakhulu ezivela kumuntu odumile wama-humorist kunokuthi kubazali bakhe:
narinka_83 Svetlakov ufana kakhulu.
christina_mazepa Svetlakov ubukeka sengathi
timoshenko.yulya1985 Kubonakala sengathi i-Svetlakova
Arina_777_li Kubonakala sengathi i-Svetlakova
svalina Ibukeka njengoSvetlakova
Kufanelekile ukusho ukuthi lesi akusona okokuqala ukuthi izingane ezidumile zibukeka njengezakwabo. Ngakho, iminyaka eminingana, abalandeli baka-Anastasia Stotskaya babeqiniseka ukuthi wabeletha indodana yakhe uSasha uFiliphu Kirkorov. Ngenxa yokuthi umculi ekuqaleni komsebenzi wakhe waba nenkosi nenkosi yaseRashiya, abaningi bakholelwa ukuthi ubaba womculi. Indlela yokuchaza ukufaneka okufanayo kwendodana ka-Anna Sedokova noSergei Svetlakov, uma abaculi bengaphambani empilweni, akucaci. Noma kunjalo, u-Hector ubheka kahle kakhulu njengombukiso. Ucabangani?
Ukushicilelwa kusuka ku-Sergey Svetlakov (@ssvetlakov)
Ukushayisana kwe Air ngeParis Hilton: isisulu noma umdlali wezithombe?
Indodakazi yaseKirikorov yasiza uyise ukuba ahlole abadlali be "New Wave"
Ikhophi yepasipoti lika-Angelina Jolie yathunyelwa kummeli uSergei Zhorin
U-Alla Pugacheva washada noFiliphu Kirkorov ngenxa yezibonakaliso ezingamanga
Uzoqala ukuthandana nomuntu
Izici zeminyaka yesikole esiphakeme
Ikhofi eSwitzerland ngeqhwa
ULavrov: uhlela ukuchitha umbusi waseJapane ngo-2018
Ukuzindla ngokumelene nokucindezeleka, inqubo yokuzindla
Amathiphu 10 Wokuvuselela Imizwa Yakho
Kanjani ukudiliva, izinhlobo zabo kanye nezinkinga?
Indlela yokukhipha ukukhanya okukhanyayo ebusweni
Ukusebenzisa i-laser fractional ku-cosmetology
Ukudla okunezinambuzane ezivela ezindlebeni zezingulube
Izindlela zokulwa namachashazi we-pigmentation
Indlela yokugcina isisindo emva kokudla kwe-mono
Indlela yokubopha intombazane ye-bolero